जापानमा पासपोर्ट हराएमा नयाँ बनाउन के गर्ने ? | Nepali In Japan
July 27, 2017 March 15, 2021
“दाई हेर्नुस् न, मेरो पासपोर्ट हरायो के गरम् ?”
यो पछिल्लो समय हाम्रो म्यासेज बक्समा धेरै आउने गरेको म्यासेज मध्येको एक हो । जापानमा नेपालीहरुको संख्या बढेकै अनुपातमा पासपोर्ट हराउनेहरुको संख्या बढिरहेको तिनै म्यासेजका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ । टोकियोमा एमआरपी फारम भर्ने काम समेत गर्ने संस्थाका एक कर्मचारीले पनि पासपोर्ट हरायो भनेर बनाउन आउनेहरुको संख्या पछिल्लो समय बढेको बताए ।
किन हराउँछ पासपोर्ट ?
हामीले देखेभोगेका आधारमा जापानमा रहेका नेपालीहरुले निम्न अवस्थामा आफ्नो पासपोर्ट लगाएतका महत्पूर्ण डकुमेन्टहरु गुमाउने गरेका छन् :
१. कोठा सर्नेबेला
२. फोटोकपी गर्न लगेको, पछि नभेटिएको
३. यात्राका क्रममा
ससर्ती हेर्दा तपाइहाम्रै लापरवाही र वेवास्ताका कारण धेरैजनाको महत्वपूर्ण सामान र कागजातहरु हराउने गरेका छन् ।
पासपोर्ट हरायो, अव के गर्ने ?
कुनैपनि सामान हराएपछि सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम त खोज्नु नै हो, कुन ठाउँमा छाडेजस्तो लाग्छ त्यहाँ पुग्नुस्, राखेको ठाउँ र राख्न सम्भावित ठाउँ सम्झन प्रयास गर्नुस् । तर पासपोर्ट हराएकै कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ भने तपाइले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको प्र’हरीमा हराएको बारे जानकारी गराउनु हो । त्यसका लागि तपाई आफु बस्ने नजिकै वा जुन स्थानमा हराएको शंका लागेको छ त्यो नजिकैको प्र’हरी विट (कोवान) मा गएर पासपोर्ट हराएका बारे जानकारी गराउनुस् । तपाई जापानी भाषामा राम्रोसंग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्न भने चिन्ता नलिनुहोस, जापानमा प्रायः पु’लिस स्टेसनमा एक न एक जना अंग्रेजी बोल्न सक्ने प्र’हरीको व्यवस्था भएको हुन्छ, उनीहरुले तपाइको हराएको पासपोर्टको बारेमा जानकारीहरु दिनुहोस र आफ्नो मोबाइल नम्बर वा कुनै सम्पर्क नम्बर पनि दिनुहोस । तपाइले दिएको जानकारीको आधारमा पासपोर्ट खोजिदिनका लागि दिएको निबेदन बुझी लिएको व्यहोराको यौटा सानो पत्र पाउनु हुनेछ। यदि तपाइँसंग मोबाइल छैन भने रिपोर्ट गरेको केहि दिनभित्र आफुलाई पायक परेको बेला सोहि स्थानमा गएर आफ्नो रिपोर्टको अपडेटबारे सोधपुछ गर्न सक्नु हुनेछ, तपाइले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु भएको छ भने पासपोर्ट भेटिएको खण्डमा तपाईलाई फोन आउनेछ ।
फोन आएन, अब के गर्ने?
सामान्यतया जापानमा हराएका कुनैपनि सामान खोज्नका लागि प्र’हरीले ७ दिनको समय लिन्छ, सात दिनभित्र भेटिएन वा कतैबाट भेटिएको बारे सूचना आएन भने सामान हराएको प्रमाणित गरिदिन्छ । अर्थात अव तपाइले पासपोर्ट हराएको प्रमाण सहितको व्यहोरा भएको पत्र लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तपाई स्थानिय प्र’हरी विट (कोवान) मा नभई प्र’हरी चौकी (खेइसाचुसो) मा जानुपर्ने हुन्छ । जानेबेला पासपोर्ट हराएको बारे जानकारी दिएको सानो चिट लिएर जान नबिर्सनुहोला । त्यहाँबाट प्राप्त हुने पु’लिस रिपोर्ट लिनुहोस् ।
पुलिस रिपोर्ट लिएँ, अब के गर्ने ?
पुलिस रिपोर्ट हात परिसकेपछि तपाइले गर्नुपर्ने काम एमआरपी(मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) फर्म र फोटोको तयारी हो । फारम भर्नका लागि आफै सक्षम हुनुहुन्छ भने नेपाली राजदूतावासको वेवसाइटमा गई फारम डाउनलोड गर्नुहोला र यो लिंकमा गएर त्यहाँ भने अनुसार प्रिन्ट गर्नुहोला, फारम भर्दा स्पेलिङहरु नबिग्रने गरि, मितिहरु गलत नहुनेगरि भर्नुहोला । फारम भर्ने सम्बन्धमा थप जानकारी यहाँ छ । आफै गर्न सक्षम हुनुहुन्न भने जानेका सहयोगी वा व्यवसायिक रुपमै फारम भरिदिने संस्थाहरुसंग सहयोग लिनुहोला ।
एमआरपीका लागि चाहिने फोटो निम्न मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्दछ :
• फोटोः६ महिना भित्र खिचेको रंगिन
• आकारः ४५ मि.मी. ह ३५ मि.मी. -४.५ से.मी. ह ३.५ से.मी.)
• पृष्ठभूमिः सादा र हलुका रंग
• अवस्थिति(Pose) : पूर्ण रुपमा अगाडि फर्केको, दुवै कान देखिने, आंखाले क्यामेरा हेरेको, टाउको पूरा र काँधको केही भाग देखिने, छायां (Shadow) नदेखिने, रातो आंखा (Red eye) नभएको, साथमा अरु व्यक्ति नभएको, मुख बन्द भएको, चहकिलो रंगको लुगा नलगाएको
• स्वरुप (Image) को स्थिति अनुहारले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म फोटो ढाकेको
• गुणस्तर प्रष्ट (Sharp focused), उच्च गुणस्तरको, नखुम्चिएको, मसी वा दाग धब्बा नलागेको, स्तरीय कागजमा तथा उच्च Resolution मा छापिएको
• चश्मा प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा : आंखा प्रष्ट देखिने, मसिनो फ्रेम, प्रकाश परावर्तन (Reflection) नभएको तथा शिशा रंगीन नभएको
• शिरपोश विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्वन्धी कारण वाहेक टाउको खुला हुनुपर्ने
फोटोका लागि तपाइ नजिकैको फोटो स्टुडियो वा माथि भनेजस्तै व्यवसायिक रुपमै फारम भरिदिने कम्पनीमा जान सक्नुहुन्छ ।
फोटो र फारम तयार भयो भने,
पु’लिस रिपोर्ट, सक्कल नागरिकता, पूरानो पासपोर्टको फोटोकपी र राहदानी दस्तुर ३६ हजार जापानी येन (पासपोर्ट हराएको, चो’री भएको, च्यातिएको वा अन्य कारण विग्रिएको खण्डमा पनि नयाँ बनाउँदा ३६ हजार जापानी येन नै लाग्छ । ) सहित मेघुरो टोकियो स्थित नेपाली राजदूतावासमा जान वा पोष्टबाट पठाउन सक्नुहुनेछ । पोष्टबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ भने पैसा समेत राखेर पठाउन मिल्नेगरि (गेनकिन खाकितोमे) गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ, पासपोर्ट बनेपछि फिर्ता आउनका लागि एउटा खाममा तपाइ बस्ने कोठा वा घरको ठेगाना समेत लेखेर पठाउनुहोला । हामीलाई जानकारी भएसम्म नागरिकतको सक्कल नै देखाउनुपर्ने हुन्छ, फोटोकपी मात्रले हुँदैन । यदि तपाईको नागरिकता नेपालमा छ भने मगाउनुहोला ।
पोष्टबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ भने नेपाली राजदूतावास टोकियोको निम्न ठेगानामा पठाउनुहोला :
✓ मेरो नागरिकता पनि हराएको हो, अब के गर्ने ?
यदि पासपोर्टका साथसाथै तपाइको नागरिकता पनि हराएको हो भने जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (साविकको सिडिओ अफिस) बाट नागरिकता तपाइको नाममा जारि गरिएको व्यहोराको प्रमाण पत्र निकाल्नुपर्नेछ, त्यसका लागि तपाइ आफ्ना आफन्तको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ ।
✓ पासपोर्टको फोटोकपी पनि छैन, अब के गर्ने ?
यदी तपाइसंग पासपोर्टको फोटोकपी नै छैन भने परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत तपाइका नाममा जारि भएको पासपोर्टको जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ, पासपोर्ट नंबर र जारी मिति अनिवार्य चाहिन्छ । यसका लागि पनि तपाई नेपालमा रहेका आफ्ना आफन्तको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ ।
✓ पासपोर्ट बनेर आउन कति समय लाग्छ ?
जापानमा संकलन हुने पासपोर्ट फारमहरु महिनामा एक वा दुई पटक (जानकारीमा आएसम्म) एकमुष्ठ संकलन गरेर नेपाल पठाइने र पासपोर्ट बन्ने पक्रिया सकिएर जापानसम्म आइपुग्दा अहिलेको अवस्थामा १ देखि डेढ महिनासम्म लाग्ने गरेको पाइएको छ । विभागको व्यस्तता हेरेर सो भन्दा कम वा सो भन्दा बढि समय लाग्न पनि सक्छ ।
✓ पासपोर्ट बने नबनेको कसरी थाहा पाउने ?
त्यसका लागि राहदानी विभागको वेवसाइटमा हेर्न सकिन्छ, यो लिंकमा गई हेर्नुहोला । पासपोर्ट फारम नेपाल पुगेको र बनेर जापान हिडेको साथै फारम रिजेक्ट भएको छ भने सो सम्बन्धी जानकारी पनि त्यहींबाट हेर्न मिल्छ ।
✓ पासपोर्ट जापान आइपुगेको कसरी थाहा पाउने ?
यसका लागि नेपाली राजदूतावास जापानको फेसबुक पेजमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, पछिल्लो समय पासपोर्ट बनेर आएसंगै आउनेहरुको नाम लिष्ट फेसबुकमै अपडेट गर्ने गरिएको छ ।
✓ पोष्टबाट डकुमेन्ट पठाएर पैसा चाहीं राजदूतावासको खातामा हाल्न मिल्दैन ?
हजुर, मिल्दैन । अहिलेसम्म सो सुविधा नेपाली राजदूतावासले दिएको छैन । पैसा पठाउँदा हुलाकमार्फत गेनकिनखागितोमे गरि पठाउनुपर्छ ।
✓ अझै केही बुझ्नुपर्ने थियो, के गरौं ?
हराएको पासपोर्ट बनाउने बारे थप जानकारी आवश्यक भएमा नेपाली राजदूतावास जापानको फोन नं 03-3713-6241 or 6242 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीलाई म्यासेज गरेर सोध्नुभएमा पनि जाने बुझे अनुसारको जानकारी दिनेछौंं ।
आशा छ यो जानकारी तपाइलाई उपयोगी लाग्यो, सेयर गरेर अरुलाई पनि जानकारी दिलाउनुस् न है । जापानमा नेपालीहरुको बसोवास सहज बनाउने हाम्रो अभियानमा तपाईको साथ र सल्लाहको सधै अपेक्षा रहिरहनेछ ।
Prevजापानमा बच्चा जन्मियो ? पूरा गर्नुपर्छ यस्ता कानूनी प्रकृयाहरु
Nextयसकारण आकर्षक छ जापानी शिक्षा, विश्वले गर्छ लोभ